Aqalka baarlamaanka Somalia iyo waqtiga dhismaha lagu bilaabayo - Caasimada Online
Home Warar Aqalka baarlamaanka Somalia iyo waqtiga dhismaha lagu bilaabayo
Aqalka baarlamaanka Somalia iyo waqtiga dhismaha lagu bilaabayo
Masuuliyiinta dowlada Turkiga ayaa sheegay inay soo dadajin doonaan dhismaha xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho,halkaasi oo ay ku shiraan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiye ku xigeenka koowaaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jaylaani Nuur Iikar,dowlada Turkiga ayaa waddo qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu dhisayo xarunta golaha Shacabka.
Jeylaani Nuur Iikar,ayaa sheegay in kulan uu la qaatay ra’iisul wasaaraha dalka Turkiga Erdogan ay kaga wada hadleen sidii dowlada Turkiga ay u dhameyn laheyd qorshaha dib loogu dhisayo aqalka baarlamaanka.
Xarunta golaha shacabka ayaa iminka waxaa lagu sameeyay dayactir kooban,waxaana dowlada Turkiga ay sheegtay in gabi ahaanba la dhisi doono aqalka baarlamaanka Soomaaliya,sida uu sheegay Iikar.
Ugu dambeyn gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jeylaani Nuur Iikar ayaa sheegay in dowlada Turkiga ay ka wada hadleen sidii dhamaan meelaha burbursan ay dib ugu dayactiri lahaayeen.